Nnukwu mmemme ahụ bụ nke weere ọnọdụ n'obi eze ọdịnala obodo, bụ Igwe Sà Ben Emeka, ma bụrụkwa nke dọtara imirikiti ụmụ afọ obodo ahụ, otụtụ ndị selitere isi n'ọrụ gọọmenti na steeti Anambra nakwa ọtụtụ ndị ọzọ e ji okwu ha agba izu na steeti ahụ na mpụga ya.
N'okwu ya dịka ọ na-eme omenala ịwa ya bụ ji kpọnkwem, Igwe Emeka mere ka a mara iri ji bụ otu n'ime mmemme pụrụ iche e jiri mara Igbo niile. O Kelere Chineke maka udo tọrọ atọ dị n'ime obodo ahụ na n'etiti obodo ahụ na obodo ndị ọzọ, ma keleekwa ya maka onyinye ndụ O jiri chọọ ha mma, ha wee dị ndụ wee gwuputa ji ha tinyere n'ala. Ọ gakwazịrị n'ihu rịọ ma kpee ekpere maka ogologo ndụ, ahụ isi ike na ọganihu nke ụmụafọ obodo ahụ, ndị Igbo na ala Naịjiria n'izùgbe, bụzị nke, mgbe o mechaara ya, ọ warie ji ahụ ibe atọ ma kesaara ya ime mkpu atọ dị n'ime obodo Ụmụeri, nke gụnyere: Ezi, Ikenga and Invite Umueri.
Na mbụ n'okwuchukwu ya na mmemme ahụ, bụ nke e jiri ofufe nrò pụrụ iche wee malite, ụkọchukwu Edward Akannọ nke ụlọ ụka "Cathedral Church of Saint Gabriel Umueri" kpọkuru ndị otu Kraịst ka ha ñomie ibi ezi ndụ ma gbaso ezi ụkpụrụ ahụ Kraịst tọbara, iji wee bụrụ ndị nketa nke alaeze eluigwe n'ụbọchị ikpeazụ.
N'okwu nke ya, onye enyemaka pụrụ iche nye aka na-achị steeti ahụ bụ gọvanọ Obianọ n'ihe gbasaara echichi ọdịnala, ndị ndu obodo na ọchịchị ime-ime obodo, bụ ọkaiwu Vera Okonkwọ kọwara mmemme iri ji ọhụụ dịka omenala na ụzọ e si akwalite udo, ịhụnanya na mmekọrịta nke ụmụnne, ma too eze ọdịnala obodo ahụ maka ezi odudu ya nye ndị obodo ahụ.
N'otu aka ahụ, oge o duuru nzukọ ọha obodo ahụ wee bịa inye igwe onyinye pụrụ iche, onyeisi ọchịchị obodo ahụ, bụ chiifu Pius Okonkwọ mere ka a mara na mmemme ahụ bụ iji kelee Chineke maka ngọzị n'owuwe ihe ubi na iji keleekwa ya maka inye obodo ahụ ezi onye ndu nwere egwu Chineke, bụkwa onye wetagoro ọtụtụ mgbanwe a hụrụ anya n'obodo ahụ.
A nọkwazịrị na mmemme ahụ wee gosi ma gbaa ọtụtụ egwu ọdịnala dị iche iche, waa achịcha bekee, bụ nke e mere site n'aka ndị obodo ahụ nọ n'agbata ahọ iri asatọ wee ruo ahọ iri asatọ na iteghete, bụkwazị ndị e nyere onyinye nkwanye ugwu pụrụ iche na mmemme ahụ, tinyere ihe oriri na ọñụñụ dị iche iche e jiri wee hazie ya bụ ọgbakọ, nke mezịrị ka mmemme ahụ zaa aha akpọrọ ya.